सबैभन्दा पुरानो पुस्तक - पत्याउनु हुन्छ? - साप्ताहिक
सबैभन्दा पुरानो पुस्तक
फाल्गुन २४, २०७४
संसारको सबैभन्दा पुरानो पुस्तक इस्ट्रुस्कान गोल्ड बुकलाई मानिएको छ । २ हजार ६ सय ७३ वर्षअघि लेखिएको यो पुस्तक ७० वर्षअघि बुल्गारियाको इस्ट्रोमा नदीमा निर्माण गरिएको प्राचीन नहर उत्खनन गर्दा फेला परेको थियो ।
६ वटा स्वर्णपत्र रहेको यो पुस्तक सुनको तारले बाँधिएको अवस्थामा थियो । यो पुस्तकमा घोडा, घोडाको प्रजनन विधि, घोडसवार सैनिकको कुशलता तथा अनुशासनजस्ता विषय समेटिएको छ । यो पुस्तक हाल बुल्गारियाको राजधानी सोफियास्थित राष्ट्रिय पुस्तकालयमा संरक्षित गरिएको छ ।
यो पुस्तकका सर्जक स्ट्रुस्कानहरू मध्य इटालीबाट ३ हजार वर्षअघि बुल्गारिया पुगेको विश्वास गरिन्छ । यो जाति हाल टर्कीमा अल्पसंख्यक समुदाय मानिन्छ ।
प्रकाशित :फाल्गुन २४, २०७४
तपाईंलाई सबैभन्दा झोक चल्ने कुरा के हो ?
विश्वको सबैभन्दा सानो ल्यापटप
सबैभन्दा राम्रा बंगलादेशी समर्थक
नेपाली संगीतको सबैभन्दा ठूलो समस्या के हो ?
सबैभन्दा महँगो रिसोर्ट
पत्याउनु हुन्छ?बाट अरु
कामदार प्रधानमन्त्री असार १६, २०७६
रूख पनि फ्यान जेष्ठ ३२, २०७६
यस्तो पनि रेस्टुराँ वैशाख ३१, २०७६
एउटा परेवाको मूल्य १ करोड ५ लाख वैशाख १७, २०७६
कीराबाट पाउरोटी चैत्र ११, २०७५
हाम्रो पेटमा कति जीवाणु छन् चैत्र ९, २०७५
महँगो जुत्ता फाल्गुन २२, २०७५
बस्ती बढाउन माघ २२, २०७५
संसारको सबैभन्दा सानो गाई माघ १४, २०७५
हेयरस्टाइलमा नियन्त्रण मंसिर २४, २०७५